पुरुषले पुरुषलाईनै बलात्कार गरेको सुन्नुभएको छ? | पहिलो बोली
पुरुषले पुरुषलाईनै बलात्कार गरेको सुन्नुभएको छ?
२०७६ पौष २३, बुधबार (१ साल अघि)
Published on: Wednesday January 8, 2020 (2 years ago)
काठमाडौं : बेलायतका सबैभन्दा खतरनाक बलात्कारी रेनहार्ड सिनागालाई जन्म कैदको सजाय सुनाइएको छ । ३६ वर्षीय उनी इन्डोनेसियाका नागरिक हुन् । उनीमाथि १५९ यौन अपराधमा १३६ बलात्कारको आरोप थियो।
अदालतका अनुसार रिनहार्डले ४८ पुरुषलाई बलात्कार गरेका थिए । पुरुषलाई फकाएर बलात्कार गरेको आरोप उनी माथि लागेको थियो । प्रहरीका अनुसार रिनहार्डले १९० जनालाई लक्षित गरेको प्रमाण पाइएको छ । उनी पहिले नै दुई मामिलामा आजीवन सजाय भोगीरहेका थिए । उनी माथि चार अलग-अलग मुद्धा चलेको थियो, जसमा १३६ बलात्कार, ८ बलात्कार गर्ने प्रयास र अन्य १४ यौन अपराध गरेको पाइएको थियो।
सिनागाले यस्ता पुरुष मात्र लक्षित गर्थे जो समलिंगी हैनन् । बेलायतको न्यायिक इतिहासमा रिनहार्ड सनागा सबैभन्दा खतरनाक बलात्कारी साबित भएको बेलायती प्रहरीले जनाएको छ। न्यायधीश सुजैन गोडार्डका अनुसार, रिनहार्ड सनागा एक राक्षस यौन शिकारी हुन्, जसलाई बाहिर छोड्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुनेछ ।
सनागाले विशेषगरी नाइट क्लबमा आउने जाने गर्ने पुरुषलाई आफ्नो शिकार बनाउने गरेका थिए । आफ्नो कामको लागि उनले बेहोस गर्ने औषधिको प्रयोग गर्थे । उनले पीडितलाई बेहोस पार्न केही खतरनाक र प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सनागालाई २०१७ जुनमा पक्राउ गरिएको थियो । एक पीडितले बलात्कार प्रयासको क्रममा प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।बेलायतका गृहमन्त्री प्रीति पटेलले यस्तो औषधिको प्रयोग गरेको सुनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।